ကျိုက်ထီးရိုးတောင်ပြိုကျမည်ကို စိုးရိမ်နေ...! - Thadin
[ May 23, 2019 ] ဗုဒ္ဓဟူး သားသမီးများအတွက် ဘဝတစ်သက်စာဟောစာတမ်း နှင့် ယတြာများ…! ဗေဒင်ယတြာ
[ May 23, 2019 ] ထူးထူးခြားခြား ဆရာဆရာမများ ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် ဆန္ဒပြ…! NEWS
[ May 23, 2019 ] ဦးထွန်းလွင် သတိပေးနေပါပြီ.. ကမ္ဘာကြီးပေါ်တွင်(၁)စက္ကန့်လျှင် မိုးကြိုး အကြိမ်(၁၀၀)ခန့်ပစ်ခတ်နေ…! NEWS
[ May 23, 2019 ] ကားခမပါ စားဖို့ငွေ ကုန်လို့မန္တလေးကနေ မကွေးကို ခြေလျှင်လျှောက်မယ့် သားအမိ အခုတော့…! NEWS
[ May 23, 2019 ] ၂၀၁၉ မေလ ၂၃ရက်နေ့ မိုးရွာနိုင်သော ဒေသများ.. ကိုယ့်နေရာပါလားကြည့်ရအောင်…! NEWS
March 15, 2019 Kay Kay NEWS Comments Off on ကျိုက်ထီးရိုးတောင်ပြိုကျမည်ကို စိုးရိမ်နေ…!
မွန်ပြည်နယ်၊ ကျိုက်ထိုမြို့နယ်ရှိ ဆံတော်ရှင်ကျိုက်ထီးရိုးစေတီရှိရာတောင်ပေါ်တွင် နေထိုင်သူများက စည်းကမ်းမဲ့အမှိုက်စွန့်ပစ်မှုများကြောင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်နေပြီး ရေရှည်တွင် ကျိုက်ထီးရိုးတောင် ပြိုကျလာမည်ကို စိုးရိမ်နေရကြောင်း ဒေသခံများထံမှ သိရှိရသည်။
ကျိုက်ထီးရိုးတောင်ပတ်လည်၌ စည်းကမ်းမဲ့ စွန့်ပစ်ထားသည့် အမှိုက်ပုံများတွင် ကြွက်များရှိနေပြီး ၎င်းတို့ နေထိုင်ရန် တွင်းများ တူးခြင်းကြောင့် မြေသားများကြွလာခြင်း၊ မိုးတွင်းကာလတွင် မိုးရေများမှာ အမှိုက်ပုံများရှိ ပလပ်စတစ်အိတ်များအတွင်း ဝင်ရောက်ပြီး ရေပမာဏများလာသည့်အခါ မြေပြိုခြင်းများ ဖြစ်ပေါ်လာနေသောကြောင့် ရေရှည်တွင် တောင်ပြိုကျမည့်အရေး စိုးရိမ်နေရကြောင်း ကင်မွန်းချောင်းကျေးရွာ၊ ကျိုက်ထီးရိုး ရင်ပြင်တော်ပိုင် ရာအိမ်မှူး ဦးကျော်မင်းဦးက ပြောသည်။
“တောင်ကမ်းပါးတွေမှာ အမှိုက်တွေကိုလာသွန်ချကြတယ်။ သွန်ချပါများလာတော့ တောင်ကမ်းပါးယံမှာရှိနေတဲ့ သစ်တောသစ်ပင် သဘာဝတွေကိုဖုံးသွားတယ်။ အမှိုက်ထုက နည်းနည်းနောနောမှမဟုတ်တာ။ အမှိုက်တွေ များလား၊ မများလားဆို အဝေးကကြည့်ရင် ရေတံခွန်ကြီးလိုဖြစ်နေတာ။
အမှိုက်ပစ်ထားတဲ့နေရာမှာ ဘာအပင်မှ မပေါက်တော့ဘူး။ နောက်တစ်ခု မိုးရွာတဲ့အခါမှာ ကြွက်တူးထားတာရယ်၊ မိုးကကောင်းကောင်းရွာလာတော့ မြေသားတွေကနူးလာပြီး ရေဝိတ်က အမှိုက်တွေပေါ်တင်ကျန်နေတော့ မြေသားတွေကိုဆွဲချသလို ပြိုကျကုန် တယ်။ မနှစ်ကဆို တစ်ညတည်းမှာ ၅ နေရာပြိုကျတယ်။
စုစုပေါင်း ၇ နေရာပြိုတယ်။ ဒီတိုင်းပဲသွားနေမယ်ဆို ရင်တော့ တောတောင်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တွေ ပျက်စီးလာမယ်။ ဟိုနေရာကပဲ့ကျလိုက်၊ ဒီနေရာကပဲ့ကျလိုက် နဲ့ ကုန်သွားမှာစိုးရတယ်။ ဒီလိုသာဆိုရင် ပြည်တွင်းပြည်ပဘုရားဖူးတွေမလာတော့ရင် ဆုတ်ယုတ်မှုတွေဖြစ်လာမယ်။ ဒီထက်ဆိုးရွားလာရင် လူတွေပါ အသက်အန္တရာယ်ရှိလာနိုင်တယ်။”ဟု ဦးကျော်မင်းဦးက ပြောသည်။
ကျိုက်ထီးရိုးတောင်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် မပျက်စီးစေရေးအတွက် တာဝန်ရှိသူအဖွဲ့အစည်းများ၊ ဒေသခံပြည်သူများ၊ ဘုရားဖူးပြည်သူများအနေဖြင့် စည်းကမ်းလိုက်နာရန်လိုအပ်ပြီး ထွက်ရှိလာသောအမှိုက်များအား စနစ်တကျဖျက်ဆီးပေးနိုင်ရန် တာဝန်ရှိသူများဖက်က ဆောင်ရွက်ပေးသင့်ကြောင်း ဦးကျော်မင်းဦးက ဆက်ပြောသည်။
ကျိုက်ထီးရိုးတောင်ရင်ပြင်တော်နှင့် တောင်ဝန်းကျင်ရှိဈေးဆိုင်များမှ နေ့စဉ်အမှိုက် ၅ တန်ခန့်ထွက်ရှိနေပြီး အဆိုပါ အမှိုက်များအား ဂေါပကအဖွဲ့ကသတ်မှတ်ပေးထားသော အမှိုက်စွန့်ပစ်ရန်နေရာများတွင် စွန့်ပစ်သူများ ရှိသလို အဆင်ပြေသလို စည်းကမ်းမဲ့ စွန့်ပစ်နေသူများလည်းရှိကြောင်း သိရသည်။
“ယခင်ကတော့ တောင်ပေါ်မှာ အမှိုက်တွေကို နေရာတစ်ခုသတ်မှတ်ပေးပြီးစွန့်ပစ်ခိုင်းပါတယ်။ ခုဆိုရင် တောင်ပေါ်မှာ အမှိုက်ခွဲခြားသန့်စင်စက်ရယ်၊ အမှိုက်မီးရှို့စက်ရယ် ၂ ခုရှိနေပြီ။ အမှိုက်မီးရှို့စက်ကတော့ အလှူရှင်က လာလှူထားပေးတယ်။ သူက မီးရှို့ဖျက်ဆီးနိုင်တဲ့ ပမာဏနည်းနေတယ်။
သန့်စင်စက်ကတော့ တစ်နေ့ကို ၁၀ တန်ကျော်လောက် သန့်စင်ဖျက်ဆီးနိုင်တယ်ဆိုတော့ စက်ရုံတွေလည်ပတ်သွားတဲ့အခါမှာ အဆင်ပြေသွားမှာ ပါ။ စက်ရုံတွေလည်ပတ်ပြီဆိုရင်လည်း ထွက်လာတဲ့အမှိုက်တွေကို လာရောက်စွန့်ပစ်ဖို့ နေရာသတ်မှတ်ပေး မယ်။
စည်းကမ်းမလိုက်နာသူတွေကိုတော့ အရေးယူနိုင်အောင်ဆောင်ရွက်သွားမယ်။”ဟု ကျိုက်ထီးရိုးဘဏ္ဍာ တော်ထိန်းဂေါပကအဖွဲ့ဝင် ဦးတင်ဝင်းက ပြောသည်။
အမှိုက်ခွဲခြားသန့်စင်စက်ရုံအား ကျိုက်ထီးရိုးရင်ပြင်တော်အနီး ဆီမီး ၉၀၀၀ ဓမ္မာရုံအနောက်ဘက်နှင့် အမှိုက်မီး ရှို့စက်အား မုဆိုးတောင်အနီးတွင် တည်ဆောက်ပြီးစီး၍ စမ်းသပ်လည်ပတ်မှုများ ဆောင်ရွက်ထားရှိပြီးဖြစ်ကာ လုပ်ငန်းစတင်လည်ပတ်ရန်သာရှိတော့ကြောင်း သိရသည်။
၂၀၁၈ ခုနှစ် မိုးတွင်းကာလတွင် အမှိုက်ပုံများကြောင့် ကျိုက်ထီးရိုးတောင်ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ ကိုးနဝင်းကျောင်းသွား လမ်း ရိုးရိုးလေးဟိုတယ်အနောက်ဘက်နေရာ၊ ကျီးပါးစပ်သွားလမ်း ရှမ်းလေးအကြော်ဆိုင်အနီး၊ ရင်ပြင်တော် လမ်းဆုံ အလုပ်သမားရုံးအနောက်ဘက်၊
မုဆိုးတောင်လမ်းနှင့် နတ်ရေတွင်းလမ်းကြားရှိ ဦးသန်းကျော်ဌေး ဆေးမြစ်ဆိုင်အနောက်ဘက်၊ ကောက်ညှင်းပေါင်းတန်း ပြည့်စုံဓမ္မာရုံအနီး၊ ကျောက်စည်ယိုစေတီအနီး လူသွား လမ်းမ၊ ရင်ပြင်တော် ကိုးနဝင်းစေတီအနီး မြေပြိုကျမှုများဖြစ်ပေါ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
မှနျပွညျနယျ၊ ကြိုကျထိုမွို့နယျရှိ ဆံတျောရှငျကြိုကျထီးရိုးစတေီရှိရာတောငျပျေါတှငျ နထေိုငျသူမြားက စညျးကမျးမဲ့အမှိုကျစှနျ့ပဈမှုမြားကွောငျ့ သဘာဝပတျဝနျးကငျြ ထိခိုကျနပွေီး ရရှေညျတှငျ ကြိုကျထီးရိုးတောငျ ပွိုကလြာမညျကို စိုးရိမျနရေကွောငျး ဒသေခံမြားထံမှ သိရှိရသညျ။
ကြိုကျထီးရိုးတောငျပတျလညျ၌ စညျးကမျးမဲ့ စှနျ့ပဈထားသညျ့ အမှိုကျပုံမြားတှငျ ကွှကျမြားရှိနပွေီး ၎င်းငျးတို့ နထေိုငျရနျ တှငျးမြား တူးခွငျးကွောငျ့ မွသေားမြားကွှလာခွငျး၊ မိုးတှငျးကာလတှငျ မိုးရမြေားမှာ အမှိုကျပုံမြားရှိ ပလပျစတဈအိတျမြားအတှငျး ဝငျရောကျပွီး ရပေမာဏမြားလာသညျ့အခါ မွပွေိုခွငျးမြား ဖွဈပျေါလာနသေောကွောငျ့ ရရှေညျတှငျ တောငျပွိုကမြညျ့အရေး စိုးရိမျနရေကွောငျး ကငျမှနျးခြောငျးကြေးရှာ၊ ကြိုကျထီးရိုး ရငျပွငျတျောပိုငျ ရာအိမျမှူး ဦးကြျောမငျးဦးက ပွောသညျ။
“တောငျကမျးပါးတှမှော အမှိုကျတှကေိုလာသှနျခကြွတယျ။ သှနျခပြါမြားလာတော့ တောငျကမျးပါးယံမှာရှိနတေဲ့ သဈတောသဈပငျ သဘာဝတှကေိုဖုံးသှားတယျ။ အမှိုကျထုက နညျးနညျးနောနောမှမဟုတျတာ။ အမှိုကျတှေ မြားလား၊ မမြားလားဆို အဝေးကကွညျ့ရငျ ရတေံခှနျကွီးလိုဖွဈနတော။
အမှိုကျပဈထားတဲ့နရောမှာ ဘာအပငျမှ မပေါကျတော့ဘူး။ နောကျတဈခု မိုးရှာတဲ့အခါမှာ ကွှကျတူးထားတာရယျ၊ မိုးကကောငျးကောငျးရှာလာတော့ မွသေားတှကေနူးလာပွီး ရဝေိတျက အမှိုကျတှပေျေါတငျကနျြနတေော့ မွသေားတှကေိုဆှဲခသြလို ပွိုကကြုနျ တယျ။ မနှဈကဆို တဈညတညျးမှာ ၅ နရောပွိုကတြယျ။
စုစုပေါငျး ၇ နရောပွိုတယျ။ ဒီတိုငျးပဲသှားနမေယျဆို ရငျတော့ တောတောငျသဘာဝပတျဝနျးကငျြတှေ ပကျြစီးလာမယျ။ ဟိုနရောကပဲ့ကလြိုကျ၊ ဒီနရောကပဲ့ကလြိုကျ နဲ့ ကုနျသှားမှာစိုးရတယျ။ ဒီလိုသာဆိုရငျ ပွညျတှငျးပွညျပဘုရားဖူးတှမေလာတော့ရငျ ဆုတျယုတျမှုတှဖွေဈလာမယျ။ ဒီထကျဆိုးရှားလာရငျ လူတှပေါ အသကျအန်တရာယျရှိလာနိုငျတယျ။”ဟု ဦးကြျောမငျးဦးက ပွောသညျ။
ကြိုကျထီးရိုးတောငျသဘာဝပတျဝနျးကငျြ မပကျြစီးစရေေးအတှကျ တာဝနျရှိသူအဖှဲ့အစညျးမြား၊ ဒသေခံပွညျသူမြား၊ ဘုရားဖူးပွညျသူမြားအနဖွေငျ့ စညျးကမျးလိုကျနာရနျလိုအပျပွီး ထှကျရှိလာသောအမှိုကျမြားအား စနဈတကဖြကျြဆီးပေးနိုငျရနျ တာဝနျရှိသူမြားဖကျက ဆောငျရှကျပေးသငျ့ကွောငျး ဦးကြျောမငျးဦးက ဆကျပွောသညျ။
ကြိုကျထီးရိုးတောငျရငျပွငျတျောနှငျ့ တောငျဝနျးကငျြရှိဈေးဆိုငျမြားမှ နစေ့ဉျအမှိုကျ ၅ တနျခနျ့ထှကျရှိနပွေီး အဆိုပါ အမှိုကျမြားအား ဂေါပကအဖှဲ့ကသတျမှတျပေးထားသော အမှိုကျစှနျ့ပဈရနျနရောမြားတှငျ စှနျ့ပဈသူမြား ရှိသလို အဆငျပွသေလို စညျးကမျးမဲ့ စှနျ့ပဈနသေူမြားလညျးရှိကွောငျး သိရသညျ။
“ယခငျကတော့ တောငျပျေါမှာ အမှိုကျတှကေို နရောတဈခုသတျမှတျပေးပွီးစှနျ့ပဈခိုငျးပါတယျ။ ခုဆိုရငျ တောငျပျေါမှာ အမှိုကျခှဲခွားသနျ့စငျစကျရယျ၊ အမှိုကျမီးရှို့စကျရယျ ၂ ခုရှိနပွေီ။ အမှိုကျမီးရှို့စကျကတော့ အလှူရှငျက လာလှူထားပေးတယျ။ သူက မီးရှို့ဖကျြဆီးနိုငျတဲ့ ပမာဏနညျးနတေယျ။
သနျ့စငျစကျကတော့ တဈနကေို့ ၁၀ တနျကြျောလောကျ သနျ့စငျဖကျြဆီးနိုငျတယျဆိုတော့ စကျရုံတှလေညျပတျသှားတဲ့အခါမှာ အဆငျပွသှေားမှာ ပါ။ စကျရုံတှလေညျပတျပွီဆိုရငျလညျး ထှကျလာတဲ့အမှိုကျတှကေို လာရောကျစှနျ့ပဈဖို့ နရောသတျမှတျပေး မယျ။
စညျးကမျးမလိုကျနာသူတှကေိုတော့ အရေးယူနိုငျအောငျဆောငျရှကျသှားမယျ။”ဟု ကြိုကျထီးရိုးဘဏ်ဍာ တျောထိနျးဂေါပကအဖှဲ့ဝငျ ဦးတငျဝငျးက ပွောသညျ။
အမှိုကျခှဲခွားသနျ့စငျစကျရုံအား ကြိုကျထီးရိုးရငျပွငျတျောအနီး ဆီမီး ၉၀ဝ၀ ဓမ်မာရုံအနောကျဘကျနှငျ့ အမှိုကျမီး ရှို့စကျအား မုဆိုးတောငျအနီးတှငျ တညျဆောကျပွီးစီး၍ စမျးသပျလညျပတျမှုမြား ဆောငျရှကျထားရှိပွီးဖွဈကာ လုပျငနျးစတငျလညျပတျရနျသာရှိတော့ကွောငျး သိရသညျ။
၂၀၁၈ ခုနှဈ မိုးတှငျးကာလတှငျ အမှိုကျပုံမြားကွောငျ့ ကြိုကျထီးရိုးတောငျပတျဝနျးကငျြရှိ ကိုးနဝငျးကြောငျးသှား လမျး ရိုးရိုးလေးဟိုတယျအနောကျဘကျနရော၊ ကြီးပါးစပျသှားလမျး ရှမျးလေးအကွျောဆိုငျအနီး၊ ရငျပွငျတျော လမျးဆုံ အလုပျသမားရုံးအနောကျဘကျ၊
မုဆိုးတောငျလမျးနှငျ့ နတျရတှေငျးလမျးကွားရှိ ဦးသနျးကြျောဌေး ဆေးမွဈဆိုငျအနောကျဘကျ၊ ကောကျညှငျးပေါငျးတနျး ပွညျ့စုံဓမ်မာရုံအနီး၊ ကြောကျစညျယိုစတေီအနီး လူသှား လမျးမ၊ ရငျပွငျတျော ကိုးနဝငျးစတေီအနီး မွပွေိုကမြှုမြားဖွဈပျေါခဲ့ကွောငျး သိရသညျ။
This Month : 43043
This Year : 238441
Total Users : 597465
Total views : 2747621